Kutheni umntu ekhubekisa? Kwaye kubaluleke kakhulu, njani ukujongana nale nto?
Impilo yabasetyhini Psychology
Yintoni endiyenzayo ukuba umyeni wam undicaphukise?
Kuthekani ukuba indoda ibuhlungu?
"Yeka uthando" - yile ngcamango yokuba okokuqala kuvela kubasetyhini. Emva koko, ukuba wayethanda, akuyi kuba yingozi? Ewe, ngakwesinye icala - kunjalo ngokwenene, kodwa kwelinye - kwingcambu ayilunganga. Emva koko, uthando, nangona kunjalo, lufana nokuthanda - luphela. Yingakho ungadabuki, ekubeni isigaba esitsha siza - uthando oluvuthiweyo. Ukuba umyeni uyakucaphukisa, ushiya, kodwa ubuya kwakhona, mhlawumbi kufuneka uqikelele ngexesha lokukwakha uthando olutsha?
Ziziphi izikhalazo, ubugwenxa nokungaqondani kwintsapho? Izizathu zingafani kakhulu. Eyona nto ixhaphakileyo emsebenzini, okanye ebomini. Mhlawumbi umhlobo wakho unzima kakhulu okwangoku, unesixinzelelo okanye unxamnye nabahlobo. Esinye isizathu kukuba akanakunakwa kwaye uyamthanda. Mhlawumbi uhlala uthi kuye kutshanje ukuba "ungumthandi ombi" okanye "uzisa imali encinci endlwini"? Ngokudla kaninzi kunjalo, abafazi ngokwabo bacinezela "iqhosha lokuqalisa", ngaloo ndlela bengaboni nto.
Ndingayichazela njani umyeni wam ukuba wandicaphukisa?
Ngulo mbuzo abafazi abaninzi ababuzayo. Zama ukumkholisa ngento emva komsebenzi onzima. Kwaye akunandaba nokuba kuya kuba yintoni - isidlo sokuthanda okanye isipho esingalindelekanga. Mhlawumbi ukhathele konke okwenzekayo kwaye ulindele ukuba uncede? Uza kuphendula ukuba akufanele uphendule ngokusondeleyo ukuhlambalaza rhoqo. Kodwa, uphosakele. Ngoku umsebenzi wakho ukulandela indlela yakhe yokuziphatha. Emva kweyiphi inyathelo okanye amabinzana aziphatha ngayo ngokuqhelekileyo?
Kodwa, ngakolunye uhlangothi, kufuneka uziqonde. Oku kubalulekile ukuze wenze i-idyll kwintsapho yakho. Nciphisa iimvakalelo zakho ezimbi. Ngoku kufuneka ufunde ukucinga ngokucokisekileyo.
Indlela yokuphendula ngokunyelisa komyeni wakhe?
Kule nto, kubalulekile ukuqhuba iimvavanyo ezininzi kodwa ezibalulekileyo:
Uvavanyo lokuqala. Uyakucaphukisa, kwaye uqhubeka ugcina izenzo zakhe kwaye uhlale ucebile, ngelixa uphindaphinda ngokwakhe ukuba yonke into iya kulungile. Okokuqala, kufuneka ukholwe kwizinto ezilungileyo, oko kukuthi, kuya kutshintsha.
Musa ukuphendula ububi ngenxa yobubi! Awudingi ukumemeza nokumthuka ngokubuyisela. Kungcono ukumbuza ukuba uyayiqonda ngokuchanekileyo ukuba ungumfazi wendlu ombi okanye unina. Qiniseka ukuba la mazwi aya kumkhokelela ekufeni!
Ungamcaphukisi umntu kumxabano. Ngokuphindaphindiweyo nangaphezulu uyiphakamisa, ithuba elincinci luza kuba ukudala idyll yentsapho. Zama ukufumanisa ukuba yintoni eyenza ukuba athukuthele. Mhlawumbi, nayiphi na isicelo okanye i-oda ziyamcaphukisa. Ngokomzekelo, isicelo "ndinike imali" singamthintela ukuba uyayifumana encinane. Ibhinqa kufuneka libe nobuqili, kwaye oku akuyikuthotywa. Esikhundleni sokumcela imali, uthi: "Ngomdla, kule nyanga andinayo imali eyaneleyo, kuba umntwana wethu uhlala egula, kwaye ndifuna ukuba athenge iipilisi. Ngaba unganinika imali? "
Ngabantu abaninzi abathandani kakhulu - baya kuhlala bexabana, kuba abalinganiswa bahluke. Kwaye akunakwenzeka ukuhlala ngaphandle kwempikiswano. Yiba mnene kwaye ube mnene nomyeni wakho. Ngamanye amaxesha awanakho inkxaso nenkxaso.
Ekugqibeleni, ndingathanda ukuphawula ukuba akudingeki silinde ukulungelelaniswa kwindoda kwangoko. Kuya kufuneka silinde ixesha elithile ukuba akuqonde. Ukunyamezela kuwe!
Indlela yokujamelana nokukhungatheka kunye nokwesaba
Indlela yokuziphoqa ukuba ulahlekelwe isisindo, ukuba akukho mandla
4 iimpawu zomntu onokutshintsha ihlabathi ukuba ibe ngcono
Izindlela zokuphelisa uxinzelelo
Ukuphumula i-gymnastics yokulawula iimvakalelo
Indlela yokungafinyeleleki kwaye ingaqondakali kubantu: 8 iingcebiso ezivela kwisazi sengqondo
Indoda iziphatha njani emva komtshato?
Emva komtshato, uVadim Kazachenko washiya ngaphandle komsebenzi
Iimpepha eziphikisanayo, indlela yokuziphepha?
Ukuba ngumfazi - yintoni na?
Yintoni okufuneka uyenze ukukholisa umntu?
IWundle ebhaka ngegalikhi kunye nemifuno